Waxeey aheyd goor gelinka dambe ah oo dadkoo dhami ay ka soo rawaxeen shaqada iyo iskuuladda. Jawigu wuxuu maalintaa ahaa mid qaboow inkastoo aanu roob mooyee baraf da’eyn, haddana Maryan-Ruun iyadoo siddii ruux waalan isla hadleeysa ayey tareenkii geeyn lahaa xaafaddeeda ka soo qabsatay bartamaha magaaladda Göteborg.
Cid kasta oo tareenka soo gashaa weey dareemeysa gabadha daaqada ag fadhisa in ay wax ka qaldan yihiin. Waase dhaqan aadanaha lugu yaqaan in ruux diifeeysan ama daruufi heeyso ay si uun eeggaane. Intii aaneey gaareen madaxadii tareenka xaafaddu istaagi lahaa ayey bilowday ineey tareenka xagga dambe ka istaagto siddii ruux diyaar ineey ka degto. Isla isla ilbiraqsiyo gudahood ayey hadana bartii ay ka kacday ku soo laabtay. Haddii la oran lahaa maandooriye ayey soo cabtay dharka ay xiran tahay awgii ayaa dadku oran leeyihiinn “maya qoftani waa muslin ee kama suuroowdo” Ruux cabsana uma eka oo ma miyir doorsoona, balse waa laga dareemaya sidda ay maqane joog u tahay oo ay maskaxiyan u tahay mid mashquulsan iskuna dhex yaacsan tahay.
La soco: Waa qormo xiiso leh oo ay shabakadda Somaliska.com idiin soo gudbin doonto dhawaan, haddii Eebbe idmo. Qormadan ma ahan qiyaali ee waa dhacdo ka tarjumeeysa dhacdooyinka qurbaha ee dadkeenna ku heereeysan kuwaas oo sammo iyo xummaanba leh. Xaquuqda qormadan waxaa leh Somaliska.com, lama adeegsan karo iyadoo ogolaansho laga heeysan shabakadda.
Nin loo diiday inuu qaato taariko baabuur sababo la xirriira magac cajiib ah oo ku qoran